Article – Page6– King Of Future
Forex Article Part(4)
📗 Forexစျေးကွက်ရဲ့သမိုင်းကတော့အနည်းငယ်ရှည်တဲ့အတွက် အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုစျေးကွက်ကို တည်ငြိမ်စေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ (1876)ခုနှစ်မှာ ရွှေရောင်းဝယ်ရေးစျေးကွက်ကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကမ္ဘာ့ရွှေရောင်းဝယ်ရေးစျေးကွက်ကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်း ရွှေစျေးကွက် ပျက်လုနီးပါးအထိ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။...
Forex Article Part(3)
-Forex Marketဟာဘယ်အချိန်တွေမှာစျေးဖွင့်ပြီး ရုံးတွေက ဘယ်မြို့တွေမှာ တည်ရှိသလဲ❓❓❓ -Stock Marketနဲ့ကော တူညီမှုရှိသလား❓❓❓❓ -Forex ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားသလဲ❓❓ -စျေးကွက်မှာ ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကော ရောင်းချတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ❓❓❓...
Forex Article Part(2)
💁‍♂️ Forex Marketကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲ 💁‍♂️ ဘယ်လိုစျေးကွက်ကြီးလဲ 💁‍♂️ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပမာဏက ဘယ်လောက်ထိရှိလဲ Forex Marketကို အတိုကောက် FX Marketလို့ခေါ်ကြသလို ငွေကြေးတန်ဖိုးပြောင်းလဲရာစျေးကွက်၊နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်ရာနေရာ (သို့) နိုင်ငံခြားငွေကြေးစျေးကွက်တည်ရှိရာနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။...
Forex Article Part(1)
👉 F.O.R.E.X (Forex) 🖐️ စကားလုံးကငါးလုံးတည်းပါ 🙄 ဒါပေမဲ့ Forexဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုရင်လူတော်တော်များများက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိကြသေးတာတွေ ရှိနေပါတယ် 📌 Forex Marketဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဘဏ်တွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊Government တွေ/ Investorတွေ/ Traderတွေက...
When you’re an indicator and Rocket Science Trader
Forex Trading မှာ ကျွမ်းကျင် မှု မရှိဘဲ အရောင်းဝယ် ဝင်လုပ်သူအားလုံးကတော့ Buy ပဲ ဝင် ဝင် Sell ပဲဝင်ဝင် Donate...
မငျ်ဂလာနေ့လယ်ခငျးပါ Trader တို့ရေ 🌌 Trader တို့အတှကျဒီနေ့မြှဝပေေးခငြျတာကတော့ကြှမျးကငြျပါးနပျတဲ့Trader တှဟော ဘာကွောငျ့ ကိုယျပိုငျနညျးလမျးနဲ့ အရောငျးအဝယျလုပျကွတာလဲ ဆိုတာတှကေို မြှဝပေေးခငြျပါတယျ။ ဒါကတော့ နစေဉျ trade မညျ့အခကြျအလကျဇယားမြားကို...
Hug Your Boss Day (18.9.2020)ယနေ့ကို Hug Your Boss Day အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Bossကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါ(အခုလို အချိန်မှာ ဒီနေ့က Hug...